Iimuvi apho abaKhulisi badlale indima enkulu
EyeKhala 14, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
IKati kunye neLeopold
Umgca webali ubonakalisa ukuba ixesha lokuhamba linokuqhagamshelwa njani kwizinto ezincinci zobomi bemihla ngemihla njengezinyusayo. Ngokunyaniseka, akunakwenzeka ukuba ungacingeli isiXeko saseNew York sanamhlanje ngaphandle kweziphakamiso nangosuku, singathethi ixesha elide kunokuba kunjalo. Nangona kunjalo, umbono opheleleyo webali elihle lothando usekwe kuloo.
Ibali lonke alizukwenzeka konke konke ukuba ibingelilo iqabane elilusizi elalimanyene noJonathan: umntwana ohlekisayo watyhiliza onke amaqhosha, kwaye uSara wayesele engekho xa ekugqibeleni wafikayo kumgangatho ofanayo bobabini bakhetha ekuqaleni.
Zonke iinkqubo zeTV malunga nezibhedlele
Uninzi lwethu luthanda ukuboniswa kumabonwakude malunga nezibhedlele kunye noogqirha ngemizabalazo yabo yemihla ngemihla yokulinganisa phakathi kobomi bobuqu kunye nobungcali. Ngamaxesha athile iyeka ukusikhathaza, kodwa yonke ngoku kwaye kuza umbuzo: kutheni kumgangatho wamanqanaba amathathu okwakha i-dialogue kwindawo yokuphakamisa unokuhlala imizuzu embalwa? Ngaba isibhedlele sinokuhlawula iindleko zokunyusela ezantsi kangaka?
Bona amanye amabali asekwe kwindawo yokuphakamisa kwi I-Elevators.com
3.3 (66.67%) 3 iivoti
okwenyaniWW Julayi 14, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Amahlaya okuthengisa izindlu noqhotyosho Isithambiso sokunyusa, Ihlaya elevival, Umboniso bhanyabhanya, Isimbozi esihlekisayo, Indawo yokuthengisa ethembekileyo, Izinto ezihlekisayo ekufuneka zenziwe kwi-Elevator, Ukuhlekisa ngento ethengisa izindlu nomhlaba, Amahlaya okuthengisa izindlu, izinto ezizokwenziwa kwindawo yokunyusela. Bookmark le Permalink.
Oktobha 2, 2018 Izixhobo eziphezulu zegadi ye-DIY ekufuneka umntu ngamnye enomdla egadini abe nazo Ukulima igadi yeyona ndawo intle uyithandayo ukuze uchithe ixesha kwizinto nezinto zokuyila. Ukuba uthanda igadi, kufuneka wazi iinkcukacha ezithile. Oomama bahlala bekhangela iindlela zokuzonwabisa ukuze basebenzise ixesha elininzi kwezinye izinto ezihlekisayo. Akukho nto inokunika uxolo ngakumbi lwengqondo kunye nokonwatyelwa ekhaya kunegadi. Luhlobo olukhulu lokukhulisa izityalo kwaye ukuzibukela zikhula- njengabo abantwana babo. Isimo sengqondo sikamama nokukhathalela egadini […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Julayi 28, 2017 Uqasha njani u-Walla Walla Realtors onamava Kubantu abaninzi, intengiselwano yendawo ethengisa izindlu inegalelo ekubeni yenye yezona zinto zibalulekileyo zentengiselwano ababeza kuzenza kubomi babo bonke. Kwimeko apho uceba ukuthenga okanye ukuthengisa ikhaya kuWalla Walla, ngokuqinisekileyo unokwenza imali eninzi. Umthengisi wokuthengiswa kwezindlu nomhlaba udlala indima ebalulekileyo kule nkalo njengoko benceda ekufumaneni ixabiso elifanelekileyo lepropathi yakho. Yiloo nto ke kufuneka ufune uncedo lukaWalla Walla onamava kunye nabaqeqeshiweyo […] exhonyiweyo Amahlaya okuthengisa izindlu
Agasti 8, 2019 Izizathu ze5 zokuba ufanele uthenge iKhaya eSipro Ixabiso lokuphila liyenyuka kwiidolophu zaseMelika. Kwizixeko ezikhulu njengeNew York neCalifornia, amaxabiso aphakathi ekhaya angaphezulu kwe- $ 600k kunye ne- $ 300k ngokwahlukeneyo. Ukuphila kamnandi kwezi zixeko, udinga amawaka eedola inyanga nenyanga. Ngenxa yoko, abantu abaninzi basuka ezixekweni baye kwezi zingabizi kangako. Abanye bashiya i-US besiya kwamanye amazwe aseYurophu. I-Cyprus iye yavela njengeyona ndawo iphambili yokufika. Eli nqaku licacisa ukuba kutheni ungafuna uku […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Matshi 24, 2017 Izizathu ezi-5 eziPhambili zokutyelela e-Istanbul I-Istanbul-Yazi apha i-Istanbul iyaziwa nge-metropolis esecaleni kwicala lasentshona apho abantu batyelelayo ngokungahambeli izityholo zeshishini, ukuhamba, kwaye esinye isizathu esidumileyo 'yipropathi.' I-Istanbul yidolophu enentliziyo evulekileyo enamehlo, onwabisayo nabakhutheleyo abathatha inxaxheba kuzo zonke iintlobo zezinto. Iyaziwa ngokundileyo ngemibono yayo ephezulu kunye nembono entle yokuhombisa. Iindawo ezahlukeneyo zomhlaba zineentlobo ezahlukeneyo zobuchule kunye nezinto enchch. Ngaphezu koko, ngenxa yoku, abantu […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Agasti 9, 2017 Iindlela ezi-7 onokongeza ubumnandi kwigumbi lakho lokuhlala Igumbi lokuhlala kulapho umphefumlo ukho kuwo onke amakhaya. Kulapho usapho luhlanganisana khona, luphumle, kwaye uchithe ixesha elisemgangathweni kunye: ukubukela imidlalo okanye iimuvi, apho abantwana badlala khona, nalapho iindwendwe ziyonwabisa. Kukwayinxalenye yendlu apho uyilo luthetha ngentla apha kunye nalapho ungcoliseko lugcinwa khona phantsi kweliso, nangona kunjalo, kwezinye iimeko, luxhaphakile. Ukwenza igumbi lakho lokuhlala libe yindlu enobunewunewu akuthethi ukutshintsha isofa sakho ngexabiso eliphantsi okanye ukuzisa isiphelo esiphakamileyo […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Agasti 21, 2017 Iingcebiso eziPhambili zokuKhetha iMathematics eNcinci engabizi Sonke sifuna ukulala kamnandi ebusuku okungenani iiyure ezisibhozo ukuya kwezintandathu ukuphepha ukujonga ukudinwa nokudinwa. Kodwa ukuba ixesha lethu lokulala elilungileyo sihlobo (sifunde-umatrasi) usibhaqa, ngoko ke akunakubakho thuba lokulala ngoxolo nangokuvakalayo. Ke, ukuba i-mattress yakho iyakungcatsha, lixesha lokuba utshintshe elidala kwaye ubambe i-spongy entsha kunye ne-fluffy mattress. Awufuni kuchitha amawaka amaninzi kwimatriki yakho entsha? Akukho ngxaki! Kukho uluhlu lomatrasi omnye ongabizi ku […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Matshi 29, 2017 Indawo Yokuhlala Yabafundi-Iklasi yeAasethi ebonakalayo enokuthi ibonelele iRobust Returns Ngokubanzi, abantu banxibelelanisa indawo yokuhlala yabafundi kunye nee-dorms ezixineneyo, iipati, iinkonkxa zebhiya ezingenanto, kunye nomculo onesandi. Nangona kunjalo, masingalibali ukuba asihlali kwimovie. Kubomi bokwenene, izinto zahluke kancinane. Abanye abazali abazimisele ukuhlawula irente kangangesithuba seminyaka emi-5 ukugcina abantwana besesikolweni; bangatyala imali kwipropathi xa bebonke kwaye bathengele umntwana wabo iflethi. Abanye, kwelinye icala, abanakukwazi ukuhlawula irente konke konke; Ngenxa yoko bakhuthaza abantwana babo […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Julayi 10, 2016 Intengiso yeNtengiso yeendaba zeNtengiso yeNtengiso kunye neNdidi yokuThengisa Yonke intengiso okanye amanqaku, angeniswe kwi-realtyWW, aya kwabelwana ngayo nabalandeli beendaba zethu zentlalo ukufikelela kwinqanaba eliphezulu lokunyuswa. Zimbini iintlobo zentengiso yeendaba zentengiso yendawo: isimahla kwaye ihlawulwe. Yeyiphi esebenzayo ngakumbi? Zininzi kakhulu iindaba zosasazo kule mihla, kwaye inani lazo lisakhula. Inzuzo yabo ephambili-bakhululekile ukuba bayisebenzise. Ke, ungabhalisa njengomsebenzisi wemidiya yoluntu kwaye ubhengeze ukuthengisa kwiarhente yakho (ibhlog, iakhawunti). Nazi […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Novemba 29, 2018 Iingcebiso zokuSebenza ngokukuko kunye noRhwebo lweNdawo yokuThengisa kunye nokuYila Xa kuziwa ekuthengiseni ipropathi, kwiRealtyWW.info siyayazi indlela ekubaluleke ngayo ukuthengisa kunye noyilo. Kwaye ukuba uyayazi indlela eyenzeka ngayo ishishini, eyona nto iqinisekileyo - uxakekile, kodwa uhlala ulifumana ixesha lokwenza intengiso yearhente yakho. Nokuba uthengisa indlu ese-Eugene, Oregon apho amaxabiso erente azinzileyo; okanye i-condo ethokomeleyo kwiLali yaseNew York yeSixeko, uhlala uyifumana indlela yokuyenza. Ukusebenza nzima okanye ukucotha, [ exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu